Xildhibaan Mahad Salaad "Dalkaan laguma maamuli karo Wareegto iyo War saxaafadeed".
Sunday July 23, 2017 - 13:35:43 in Wararka by Super Admin
Quux siyaasadeed ayaa ka dhax dilaacay mas'uuliyiinta ugu sarraysa dowladda Federaalka kadib amaro iyo caga jugleyn ka dhan ah ganacsatada Muqdisho oo kasoo yeeray wasiirro laf dhabar u ah xukuumadda Xasan Cali Kheyrre.
Xildhibaano kasoo jeeda beelaha magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay kulamo ku leeyihiin Hoteello ku teedsan wadada Makka Al Mukarrama waxaana lafilayaa in ay war kasoo saaraan warar soo baxay oo sheegaya in Kheyre uu saraakiil Mareykan ah siiyay xog halis gelinaysa shirkadaha ganacsiga waaweyn.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah Baarlamaanka DF-ka ayaa si adag uga war celiyay hanjabaad ka timid Sanbaloolshe Taliyaha Nabad sugidda iyo wasiirka amniga waxayna hanjabaadahaasi ku socdeen ganacsatada gobolka Banaadir isagoo tilmaamay in dalkaan aan lagu maamuli karin wareegto iyo War saxaafadeed.
Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu Mahad Salaad kaga hadlay warkii Sanbaloolshe ee ahaa in tallaab adag laga qaadi doono ganacsatada looga shakiyo in ay xiriir lacageed la sameeyaan Xarakada Al Shabaab.
ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Sanbaloolshe iyo Isloow oo ah wasiirka Amniga uu Farmaajo u xilsaaray in ay lacago baad ah ka qaadaan ganacsatada magaalada Muqdisho arrinkaas oo keenay iyo laamaha ammaanka DF-ka ay Hanjabaad hawada umariyaan shacabka la dulimiyay ee kunool magaalada caasimadda ah.
Mooshin ka dhan ah xukuumadda Kheyre oo horyaal golaha Baarlamaanka ayaa salka ku haayo boobka sida gaarka ah loogu haayo hantida dadweynaha gobolka Banaadir sida lagasoo xigtay xildhibaano katirsan Baarlamanka DF-ka kuwaasi oo horboodaya mooshinka ka dhanka ah xukuumadda Kheyre.